Madaxweyne Uhuru oo sheegay in lagu dhawaaqi doono natijada imtixaanka dugsiga hoose. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Uhuru oo sheegay in lagu dhawaaqi doono natijada imtixaanka dugsiga hoose.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in natijada imtixaanka dugsiga hoose dhexe ee primariga uu diyaar yahay in la soo saaraayo.
Hadalkan ayuu jeediyay xili uu maanta ku sugnaa kaniisada Gachororo.
Hogaamiyaha ugu sareeya dalka ayaa ugu baaqay ardaydii u fariisatay imtixaanka inay ku qancaan natija walbo ay helaan, isagoona intaa ku daray in dowladu ay xaqiijin doonto ardayda inay ku biireen dugsiyada sare.
Sida uu sheegay madaxweynaha arday walba ayaa heli doona warqada xulashada dugsiga sare ka hor dabaaldega ciida masiixiga ee Christmas.
Waxaa uu sheegay in dowladu ay sii wadi doonto dadaalka ay ardayda uga bixineyso qarashaadka waxbarashada sida lacagaha dugsiyada iyo lacagaha lagu iibsado agabka waxbarashada.
Wuxuuna waalidiinta ugu baaqay inay dowrkooda ka qaataan oo ay ilmahooda u iibiyaan darka skuulada ayna xaqiijiyaan in caruurtooda quudiyaan.
Dhanka kale arday u fadhiyay imtixaanka dugsiga sare da’adiisana lagu sheegay 17 jir ayaa aroornimadii hore ee saaka geeriyooday isagoo ay ku socoto daaweyn.
Ardaygan oo lagu magacaabo Javan Onyango kuna qaadanaayay imtixaankiisa dugsiga wiilasha iyo gabdhaha ee DC ayaa la sheegay inuu dhaawac soo gaaray isagoo kubad ku ciyaaraya xarunta iskuulka.
Joel Otieno oo ah Chief-ka xaafada galbeed oo xaqiijiyay dhacdadan ayaa sheegay in canuga uu dhulka ku dhacay kadib markii ay kubada caaloosha uga dhacay, waxaana loola cararay isbitaalka sida gaarka loo leeyahay ee Rodi Kopany.
Gudoomiyaha dowlada dhexe u qaabilsan dhanka amaanka ee deegaanka Rangwe Elvis K’Olum ayaa sheegay in canuga loo sii gudbiyay isbitaalka ismaamulka Homa bay si uu u helo daryeel caafimaad oo deeri ah halkaas oo uu ku dhintay.
Meydka ardayga ayaa la dhigay goobta meydadka ee isbitaalka Homa bay.
Dhacdadan ayaa imaaneysaa hal isbuuc uun kadib markii arday kale oo imtixaanka ka sameeynaayay dugsiga wiilasha iyo gabdhaha ee Atemo uu geeriyooday kadib markii uu dhulka ku dhacay isagoo kubad ciyaaraayo.
← Dadaaladii caafimaad ee lagula tacaalayay Ebola oo la hakiyay
Joseph Boinnet oo beeniyay eedeymaha sheegaayo in ciidamada ilaalada xuduudaha ay laaluush ka qaaataan ururka Al shabab. →